के हजुर यी जापानी खाने कुरा खान सक्नु हुन्छ ? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > FOOD > के हजुर यी जापानी खाने कुरा खान सक्नु हुन्छ ?
जापानी खानाको कुरा गर्ने हो भने धेरै को दिमागमा सुशी र सासिमी आउछ। अरु थुप्रैको दिमागमा रामेन आउछ। जापानमै बस्ने नेपालीहरुलाई तेन्पुरा, दोन्बुरि मनपर्न सक्छ। तर आज म हजुरहरुलाई जापानका केहि रोचक खाने कुरा बताउनेछु। यी खानेकुराहरु जापानमा लोकप्रिय भएता पनि बिदेशीहरु भने नाक खुम्च्याउचन। यी खाने कुरा पहिलो चोटी खानु मात्र पनि आफैमा एउटा च्यालेन्ज बन्न सक्छ। के के हुन् त यी खाने कुरा हरु ? आउनुहोस थाह पाई राखुम है त यी अच्चम्मका खाने कुरा।
सरल भाषामा भन्दा नात्तो कुहुयाइएको भटमास हो। तर यसलाई कन्ट्रोलड बाताबरणमा फरमेंट गरिने हुनाले, खादा जिउलाई नराम्रो असर गर्दैन। नात्तोलाई एकदम स्वस्थ खानाको रुपमा लिईन्छ। जापानीहरुमा पनि नात्तो मन पराउने र मननपराउने मानिस हुन्छन। कोहि नात्तो खानाले अरु खानापनि रुच्ने बताउछन। अरुलाई चाहि नात्तो सबैभन्दा गनाहउने खान लाग्छ।
हुन पनि नात्तो अमोनिया जस्तै गनाउछ। गन्धले नै यो खान लायकको छैन जस्तो हुन्छ। जसो तसो गन्ध झेली सकेछी अर्को बाधकको रुपमा यसको चिप्लो सिगान जस्तो टेक्स्चर आउछ। मलाई व्यक्तिगतरुपमा भन्दा नात्तो मनपर्छ।
माछाको शुक्रानुलाई जापानमा धेरै मिठो डेलिकेट खाना मानिन्छ भन्दा जो कोहि नि अचम्ममा पर्छ। शिराको भनेको शुक्रानुले भरिएको माछाको योनाङ्ग हो। प्रयोग गरिने माछामा कड फिस, अन्ग्लर फिस, साल्मोन, स्क्विड, पफ़र फिस पर्दछन। यो परिकार पाकेर वा तेतिकै काचो खाइन्छ। मैले यो परिकार एक चोटी चाखेको छु। त्यो अन्तिम चोटी बनाउनेछु।
फुगु माछा धेरै मिठो माछा हो। साशिमी र चिरिनाबे बनाएर खाइन्छ| यसको टेक्स्चर जेलाटिन जस्तै हुन्छ। यसमा अरु माछाको जस्तो कडा गन्ध हुन्न।
यसलाई यो लिस्टमा राख्नुको दुई कारण छन्| पहिलो चाहि यसको मूल्य हो। एकजनाले फुगुको पुरा कोर्स गर्दा २०००० एन सम्म पर्छ। अर्को कारण चाहि यो माछामा एक प्रकारको बिष हुन्छ। राम्रो संग सफा नगरी यो माछा खायो भने मानिस मर्न सक्छ। जापानको फुगु रेस्टुराण्टमा फुगु बनाउने मानिसले कम्तिमा पनि ३ वर्षको ट्रेनिंग लिएको हुन्छ। सबै भन्दा मिठो भनिने फुगुको कलेजो खान जापानमा १९८४ देखिने प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यो चाहि खान घिनलाग्ने भन्दा नि खान हुने या नहुने सोचका मानिस भेटिन्छन। बासाशी भनेको घोडाको पातलो स्लाइस गरिएको मासु हो। जापानको फ़ुकुओकको इजाकायाहरुमा बासाशी सजिलै पाइन्छ।
मैले यो एक पटक खाएको छु। मलाई चाहियो मिठो वा नमिठो दुवै लागेन। बिदेशीहरु मानिसको साथी जस्तो घोडालाई कसरि खान सकेको होला भनेर अचम्ममा पर्छन| तर यहि नै त संस्कृतिक भिन्नता हो। जापानीहरुलाई खरायोको मासु खान्छन भन्दा अचम्म परेको जस्तै हो।
यो पनि बासाशी जस्तै विवादिद परिकार हो। कुजिरा भनेको जापानी भाषामा व्हेल हो। यदि हजुर एनिमल राईटको हुनुहुन्छ भने यो परिकार हजुरको लागि होइन। व्हेल एक लोप हुन लागेको प्राणी भएकाले बिदेशीहरु कुजिराको मासु भनेछी नाक खुम्च्याउछन। जापानमा खाईने कुजिरा मिन्कु प्रजातिको व्हेल हो। यो अरु व्हेल जस्तो लोपुन्मुख छैन। जापानीहरु व्हेल लोप नहोस् भनेर बैज्ञानिक व्हेलिंग ( व्हेल मर्ने तरिका) गर्छन। यसमा रातो मासु बढी हुन्छ। जापानको सुपर मार्केटमा कुजिरा सजिलै किन्न पाईन्छ। स्तनधारी भएकोले यो माछा कम बिफ स्टेक जस्तो स्वादको हुन्छ।
हजुरले अब जापानको केहि रोचक र विवादिद परिकार थाह पाउनु भयो। अब अन्तिम प्रश्न, के हजुर यी परिकार खान सक्नु हुन्छ ?